‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को ग्राण्ड फिनाले सुरु, को बन्ला त बिजेता ! हे’र्नुहोस् (लाइभ भिडियो) – SUDUR MEDIA
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को ग्राण्ड फिनाले सुरु, को बन्ला त बिजेता ! हे’र्नुहोस् (लाइभ भिडियो)
भिडियो मनोरञ्जन संगीत
August 7, 2021 AdminLeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को ग्राण्ड फिनाले सुरु, को बन्ला त बिजेता ! हे’र्नुहोस् (लाइभ भिडियो)
एसएमएस र प्रभु पे मार्फत देश विदेशबाट एक साता गरेको भोटिङका आधारमा यी फाइनालिस्टहरु छानिएका हुन् । आज शनिबार हुने ग्राण्ड फिनालेमा पब्लिक भोटको आधारमा द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ को बिजेता घोषणा हुने छ । आजको ग्राण्ड फिनालेको प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँबाट हेर्नुहोस्ः